BURMA: Tirada Muslimiinta Ka Qaxaya Xasuuqa Oo Korodhay
Burma (Dhamays) – Waxaa aad u kordhay dadka muslimiinta Rohingya ee ka qaxaya dalka Myamar, waxayna gaadheen illaa 270,000 qof sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in korodhka badan ay ugu wacantahay in la ogaaday dad cusub oo meelo kala ka qaxaya.
Rabshadaha ka jira Myamar ee dadka lagu qixiyay ayaa waxa ay bilaabmay kadib markii kooxo wax iska caabbin ah oo ka tirsan qoowmiyadan Rohingya ay weerareen saldhigyo booliis.
Dadka Myamar kasoo qaxaya ayaa sheegay in ciidamada militariga ay gubayaan guryaha, islamarkaasina ay dhibaataynayaan dadka.
Dowladda Myamar ayaa beenisey eedeymaha la xidhiidha in ay ku xad gudbayso dadka Rohingya, waxayna sheegtay in ciidamada ay la dagaalamayaan kooxo falaago ah.
Dadka soo qaxaya ayaa waxa ay galayeen dalka Bangaladesh, iyaga oo gudbayay xudduuda labada dal.
Xerooyinkii horay u jiray ee qaxootiga ayaa buuxsamay, dadka cusub ee halkaasi gaadhaana waxa ay dagayaan meelo cusub.
Dadka qaarkood ayaa masaafo dheer lugeynaya, qaarkood ayaa doonyo ku baxsanaya, waxaana ka mid ah illaa 300 qof oo doon ku gaadhay Bangaladesh maalintii Arbacada.
Dhibaatada lagu hayo dadka Rohingya ayaa walwal ka abuurtay meelo kala duwan oo Adduunka ka mid ah, waxaana hoggaamiyaha dalkaasi haweeynayda lagu magacaabo Aug San Suu Kyi loogu baaqay in ay wax ka qabato.
Dadka baaqa u diray waxaa ka mid ah Desmond Tutu oo ka wada tirsanyihiin bahda dadka qaatay abaalmarinta nabadda Adduunka.
Waxaa xitaa jiray baaqyo loo jeedinayo guddiga bixiya Nobel-ka oo ah in ay kala noqdaan Suu Kyi, balse guddoomiyaha guddiga abaalmarinta bixiya Berit Reiss-Andersen ayaa sheegay in aysan taas suurtogal ahayn.
Previous: Wasiirkii Boosaha Ee Xukuumaddii Rayaale Oo Geeriyooday + DAAWO Wareysi Xusuus Reeb Ah
Next: Wixii Aan Kala Kulmay Laba Masuul Oo Ka Tirsan Xukuumadda Siilaanyo !